knowledge | Mg Ogga's Notes
၁၉၅၀ ခုနှစ်များမှ စ၍ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့် အပြုသဘောဆောင်သော လူမှုပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အလို့ငှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအမံများ အပြိုင်းအရိုင်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ မွန်မြတ်သော ရည်မှန်းချက်များထားကာ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သော်လဲ ဒီအေဂျင်စီများရဲ. ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုက်ဖျက်ရေးမှာ မအောင်မမြင် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဒီကာလအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆိုင်သော လေ့လာမှုနယ်ပယ်တွေမှာ သီအိုရီပေါင်းများစွာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ၎င်းသီအိုရီ တစ်ခုစီတိုင်းမှာလဲ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ရှုမြင်မှုများ၊ အကြောင်းပြချက်များ အသီးသီးရှိကြတယ်။ ယနေ့အချိန်ထိ အသုံးဝင်၊ အသုံးပြုနေကြသည့် အခြေခံသည်အိုရီ တစ်ချို့ကို ဆွေးနွေးရအောင်။ ထိုမျှမက လူသား၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတာ ယနေ့အချိန်အခါအတွက် ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်လဲကြည်ရအောင်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးစက်မှုနိုင်ငံများ၏ ခြေရာအတိုင်း တစ်သဝေမသိမ်း လိုက်လျောက်ရမည်ဟူသော ယုံကြည်ခံယူချက်အပေါ်မှာ ဒီအဆိုကို အခြေခံထားခြင်းပဲ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆတာ ဖွံ့ဖြိုးရေး၏ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်…
April 7, 2009 in လူမှုဖွံဖြိုးရေး, ဆောင်းပါး.
အသိပညာ အသိဥာဏ်ဆိုတာ ဘယ်ဟာဟုတ်တယ် ဘယ်ဟာမဟုတ်ဖူး ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တွေမြင်လာအောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးခေါ်ကြံစည်စွမ်းလိုထင်တယ်။ အကြောက်တရားကင်းကင်းနဲ.ရဲရဲဝံ၀ံ တွေးခေါ်ကြံစည်စွမ်း ဟာ ပုံသေကားကျ အတုလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဖူး ကိုယ်ပိုင်ကြံစည်စွမ်းဖြစ်တယ်။ ကြောက်ရွံထိပ်လန်နေ ရင်တော့ ဘယ်အသိတရားမှမရနိုင်ဖူး။ ရေလိုက်ငါးလိုက် နေထိုင်သူတွေဟာ အမုန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးသူမဟုတ်ဖူး။ အမုန်တရားကိုတောင့်တသူ တွေဟာအမြဲတမ်း စောင့်ကြည်နေမှသာ၊ အမြဲတမ်းသင်ကြားနေ တဲအခါမှသာ အမှန်တရားကိုတွေရမယ်။အသိပညာက လူးသားတွေရဲ.အတွေးအခေါ်၊ပေါင်း သင်းဆက်ဆံရေးနဲ. မေတ္တာတရားတွေကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ကြောက်ရွံ.မှုကို အတွင်းအပြင် လုံးဝ ကင်းစင်အောင်ဖယ်ရှားရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမောင် သာမညရဲ. ရှင်သန်သော ဘ၀ မှ ကူးယူပါသည်။
January 23, 2009 in တွေးမိတွေးရာ.